Taageerayaasha naadiga Marseille oo soo qaatay BOORAR ka dhan ah rugcadaaga Chelsea Didier Drogba…(Maxaa ku qornaa??) – Gool FM
Taageerayaasha naadiga Marseille oo soo qaatay BOORAR ka dhan ah rugcadaaga Chelsea Didier Drogba…(Maxaa ku qornaa??)
(Marseille) 16 Jan 2017. Taageerayaasha naadiga Marseille ee dalka Faransiiska ayaa soo qaatay boorar ka dhan ah dhaliyihii Chelsea Didier Drogba kulankii ay shalay la yeesheen Monaco iyadoo guul daro wayn loo saariyay Marseille oo mininkeeda ku ciyaareysa.
Drogba oo koox la’aan ah isla markaana sheegay inuu doonayo inuu ciyaaraha sii wado ayaa kol dhaweyd ka dhawaajiyay inuu jecel yahay naadigiisii hore ee Marseille isla markaana uu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto isagoo waliba mushaarkiisa dhimaya haddii ay u yeeraan.
Laakiin taageerayaasha Marseille ayaa kulankii dhawaa soo qaatay Boorar waa wayn oo ka dhan ah rugcadaaga reer Ivory Coasta.
“Drogba Jooji inaad leedahay waxaan jeclahay Marseille, waxaad bishiiba sameysaa lacago aan kasban doonin nolosheena.”. Mid ka mid ah Boorarka ayaa sidaa ku qornaa.
Ku kale ayaa lagu qoray: “Jooji inaad ka xun tahay oo dib ugu laabo Shiinaha.”.
Warar hor leh oo ka soo baxaya sheekada cakiran ee Diego Costa iyo Chelsea
SAWIRRO+MUUQAAL: Simone Zaza oo ku biiray Valencia